सफल उद्यमी बन्न के गर्ने ? यस्ता छन् टिप्स ! - Khula Patra
सफल उद्यमी बन्न के गर्ने ? यस्ता छन् टिप्स !
प्रकाशित समय: २१:५४:५८
एक सफल उद्यमी बन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । जीवनको उद्देश्यलाई सफल बनाउन धेरै कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ । केही टिप्स यस्ता छन् ।
ग) मेरा उपभोक्ता ग्राहक र आफैप्रति के प्रतिज्ञा गरेको छु ?
योजना बनाउने क्रममै तपाईंले कस्तो प्रकारको व्यवसाय शुरू गर्दै हुनुहन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । जस्तो कि, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित व्यवसाय शुरू गर्न धेरै लगानी आवश्यक पर्दैन । फ्रेञ्चाइजीका लागि मध्यम खालको लगानी आवश्यक पर्छ । तर, यो केसम्बन्धी हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । उच्च प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय शुरू गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले, तपाईं कुन प्रकार र स्तरको व्यवसाय शुरू गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा तपाईंको लगानी भर पर्छ । त्यसअनुसार नै तपाईंको व्यवसाय पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।